महिला - Dhangadhi Khabar
सोमबार ०९, जेठ २०७९ १९:३५
कञ्चनपुरका महिलाको गुनासो : महिला–पुरुष बराबरीको नारा व्यवहारमा लागु हुनसकेन
बुधबार, २५ फागुन २०७८ रासस
जिल्लामा महिला–पुरुष बराबरीको नारा व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन।
महिलाले घरको काम गरेनन् भने के होला ?
सोमबार, २४ फागुन २०७७ धनगढी खबर
अहिले पनि कतिपय मानिसका लागि महिलाले गर्ने घरको कामको कुनै महत्व छैन। घरमा दिनरात काम गर्दा पनि त्यसको कुनै मूल्य नदिँदा महिला थप हेपिन पुगेका छन्।
कञ्चनपुरमा रुखमा झुण्डीएको अवस्थामा एक महिला मृत फेला
शुक्रबार, ०७ फागुन २०७७ धनगढी खबर
कञ्चनपुरमा रुखमा झुण्डीएको अवस्थामा एक महिला मृत फेला परेकी छिन् ।
शनिबार, २० मङि्सर २०७७ एजेन्सी
जुन घरमा महिलालाई पुरै सम्मान मिल्छ उसको घरमा कहिल्यै पनि धनको कमी हुँदैन ।
तीन दिनमा २०८ देश घुमेर विश्व रेकर्ड
आइतबार, ०७ मङि्सर २०७७ एजेन्सी
एकजना महिलाले तीन दिनमा २०८ वटा देशको यात्रा गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरेकी छन्।
आइतबार, ३० कार्तिक २०७७ धनगढी खबर
पुरुषहरु महिलालाई विश्वास गरे गरुन् नगरे नगरुन् तर महिलाहरुले कुनै न कुनै रुपमा ढाँटिरहेका हुन्छन्, एक अध्ययन
एक्सन अगेंष्ट हंगर नेपाल द्वारा ५८ लाख बराबरको केएन९५ मास्क हस्तानतरण
बिहिबार, २७ कार्तिक २०७७ धनगढी खबर
एक्सन अगेंष्ट हंगर(ए.सी.एफ.)नेपालले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा समाज कल्याण
बिहिबार, १३ कार्तिक २०७७ धनगढी खबर
धनगढीकी कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु भएमो छ ।
नेकपा सांसद निरु पाललाई कोरोना संक्रमण
बिहिबार, २९ असोज २०७७ धनगढी खबर
नेकपा सांसदका साथै महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरु पाललाई कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको छ। कोभिड-१९ को लक्षण देखिएपछि उनले कोरोनाको स्वाब दिएर परीक्षण गराएकी थिइन्।
बैंकको ऋण तिर्नबाट बच्न यी महिलाले यति सम्म गरिन्
सोमबार, २६ असोज २०७७ एजेन्सी
वास्तवमा संघाईको वुहानमा महिलाको २५ मिलियन युआन अर्थात ३.७१ मिलियन डलर ऋण थियो । एक स्थानिय अदालतले महिलालाई ऋण तिर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
युवतीको कुमारीत्व परीक्षण गर्ने अनौठा तरिका, यी देशमा किन गरीन्छ परीक्षण ?
शुक्रबार, २३ असोज २०७७ एजेन्सी
हरेक देशमा महिलाको विवाहको लागि उमेर निर्धारण गरिएको हुन्छ । निर्धारित उमेरभन्दा अगाडि विवाह गर्र्नुलाई गैर कानुनी मानिन्छ । केही देशमा त महिलालाई कुमारित्व परिक्षण गर्ने नाममा मृ’त्युसम्मको सजाय दिइन्छ । केटीहरुको पवित्रता पत्ता लगाउन सबैभन्दा आश्चर्य लाग्दो तरिका साउदी
भारतमा बलात्कार गर्ने युवकसँग युवती प्रेममा चुर्लुम्म डुबेपछि…?
शुक्रबार, ०९ असोज २०७७ एजेन्सी
महिलामाथि सँसारको जुनसुकै समाजमा दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । महिलाहरु बाध्य भएर पीडा सहनु परेको छ । त्यस्तै मध्येको एउटा घटना भारतमा भएको छ । पन्जाबमा केही समय पहिले नाबालिकामाथि बलात्कार भएको छ । जसको
महिलाको निर्वस्त्र तस्वीर जमानत राखेर ऋण दिने कम्पनी
बिहिबार, ०१ असोज २०७७ एजेन्सी
कहिले यस्तो चीजको आवश्यकता पर्छ जसलाई नगद दिएर पनि खरिद गर्न पाउदैनौ । कहिले हाम्रो आर्थिक अभावको कारण खरिद गर्न पाएका हुँदैनौ । यस्तो अवस्थामा ऋण लिने गरिन्छ । घर ऋण, शिक्षा ऋण, कृषि ऋण जस्ता ऋणहरुको प्रकार छन् ।
आज राष्ट्रिय बाल दिवसः ‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता’ नाराका साथ मनाइँदै
सोमबार, २९ भदौ २०७७ Dhangadhi Khabar
‘विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस सोमबार भर्चुअलरुपमा मनाइँदै छ ।
किशोरीले युवा अवस्थामा प्रबेश गर्दा देखीन्छन् यस्ता परिवर्तन ?
शुक्रबार, १९ भदौ २०७७ Dhangadhi Khabar
किशोर अवस्था सकिएसंगै युवा उमेरमा प्रवेश गर्दा महिलाको शरीरमा बिभिन्न परिवर्तन आउने गर्दछन् । हर्मोनको परिवर्तनसंगै आउने शरीरको बदलावका कारण कतिपय महिलालाई यो अस्वभाविक लाग्न सक्छ । तर हरेक
मेरी बोनापार्टः जसले महिलाको चरम यौन आनन्दको खोजीमै जीवन बिताइन्
कसैको लागि मेरी बोनपार्ट महिलाको कामुकता अध्ययनको अग्रणी अनुहार थिइन्, जबकि कसैका लागि उनी एक धनी महिला थिइन्, जसले त्यस समयमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राखेकी थिइन् । तर सत्य यो हो कि फ्रान्सका पूर्वसम्राट नेपोलियन प्रथमकी भतीजी र एडिनबरा प्रिन्स फिलिपकी काकी मेरी बोनापार्टमाथि धेरै जसो